Zombane okanye ulophu Tshisa Hot Air Ukutya Ukuqwayita Machine - China Qingdao Machinery uqinise
Zombane okanye Steam Tshisa Hot Air Ukutya Ukuqwayita Machine Isiza umsebenzi yokomisa iimveliso zokutya inyama emva lobushushu eliphezulu nzala, iimveliso yemifuno, iimveliso ezincinane package zeplastiki okanye iimveliso iphakheji cleaner. Ukutya kubekwa phezu stainless ibhanti sentsimbi screen (apho yenziwa 12-60 mesh net stainless), ibhanti sikrini ihamba phambili nangasemva kwibhokisi yokomisa. Indlela ephambili zokufudumeza na zokufudumeza yombane, ukufudumeza zomphunga kufudumeze umoya oshushu. Umoya oshushu ungaya ...
Zombane okanye Steam Tshisa Hot Air Ukutya Ukuqwayita Machine Isiza umsebenzi yokomisa iimveliso zokutya inyama emva lobushushu eliphezulu nzala, iimveliso yemifuno, iimveliso ezincinane package zeplastiki okanye iimveliso iphakheji cleaner.
Ukutya kubekwa phezu stainless ibhanti sentsimbi screen (apho yenziwa 12-60 mesh net stainless), ibhanti sikrini ihamba phambili nangasemva kwibhokisi yokomisa. Indlela ephambili zokufudumeza na zokufudumeza yombane, ukufudumeza zomphunga kufudumeze umoya oshushu. Umoya oshushu Ungahamba izithuba ukutya, i umphunga likhanyelwe evela imingxuma ukufuma zeemoto. Ibhokisi yokomisa yi iqulathe iindawo ezininzi, ukuba ufuna ukugcina isithuba, iinxalenye zokufudumeza singenziwa njengohlobo layer multi. Uluhlu ubude 6-40m, ububanzi ngempumelelo 0.6-3m.
Previous: Zifakwa Imifuno Processing Machine Line
Okulandelayo: Bati Water Fefa Milk Pasterization Machine
umatshini womoya yokomisa
chips banana umatshini ezincamathelayo ngembiza
umatshini icassava ngembiza
umatshini yenkuku ngembiza
iitshiphusi ngembiza umatshini
umatshini ngembiza eqhubekayo
umatshini ngembiza enzulu
iqanda umatshini ngembiza
umgca iimveliso iqanda processing
umatshini iintlanzi ngembiza
ukutya umatshini womoya yokomisa
ukutya kwiingxowa sithambe umatshini air yokomisa
package ukutya umatshini wokucoca yokomisa
package ukudla okuqinileyo umatshini umoya obandayo nokomisa
package ukutya umphezulu umatshini womoya yokomisa
chips ngembiza machine
umatshini iziqhamo futhi omisa yemifuno
umatshini iziqhamo ezincamathelayo ngembiza
ngembiza chips umatshini
ngembiza umatshini okulula
ngembiza umatshini ukutya lokutya
సెన్సరు isivamvo umatshini ngembiza
ngembiza industrial machine
KFC umatshini ngembiza
itswele machine ngembiza
peanuts ngembiza umatshini
iplastiki package ibhegi wokomisa
yehagu ulusu ngembiza umatshini
umthamo umatshini ngembiza ukutya
cleaner ngembiza ngomatshini
ixabiso umatshini ezincamathelayo ngembiza
Three Pot Parallel Udidi Ukutya Processing babethi ...